Vavaky ny Zanak'ondry kely malemy fanahy? Mampiorina, mifehy ary mifatotra [Tiana]
Vavaky ny zanak'ondry kely malefaka. Ilay zanak’ondry kely dia ilay biby izay nampiasain’Andriamanitra mba hanadiovana ny fahotan’izao tontolo izao. Izay no nahatonga ny fivavaky ny zanak'ondry malefaka Asa miorina amin'ny finoana miorina amin'ny soratra masina izany.
Ity vavaka ity dia atao miaraka amina tanjona marobe miankina amin'ny zavatra ilainao.
Saingy, ny tanjona malaza indrindra dia ny fanala baraka olona toa ny zanak'ondry dia tandindon'ny fahalemem-panahy.
Izy io dia maneho ny toetran'ny biby izay, mandry eo an-kibony, dia taratry ny fandriampahalemana misy azy.
Rehefa angatahina, dia atao manondro ity toetra mampiavaka ity, indrindra ny angatahina mba ho ity olona ivavahantsika ity.
1 Vavaky ny zanak'ondry malefaka
1.1 Vavaka ataon'ny zanak'ondry malemy fanahy ho an'ny olon-tiana
1.2 Fivavaky ny zanak'ondry malefaka hanjaka, hanjaka ary hamatotra
1.3 Hanjaka amin'ny fahavalo
1.4 Vavaky ny zanak'ondry malefaka
2 Azoko lazaina ve ny vavaka rehetra?
Na dia sarinny biby aza ny zanak'ondry malefaka dia sary masina ampiasain'ny mpino izany hitarika ny vavak'izy ireo.
Manome torolàlana ho an'ny zanak'ondry masina ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny bokin'ny filazantsara Raha ny filazan'i Md Joany dia tsy zavatra hafahafa amin'ny fampianarana kristianina izany.
Hita amin'ny aura eo an-dohanao izany maneho ny fahamasinana; mitazona hazofijaliana izay ilazana ny fahafoizan-tena nataony ho famonjena ny olombelona ary koa toy izany ny saina fotsy izay azo jerena ao ambadik'afo dia hita ho tandindon'ny fandriam-pahalemana.
Izy io dia hosodoko izay manome fahalemena, fandriampahalemana sy fahalemem-panahy.
Vavaka ataon'ny zanak'ondry malemy fanahy ho an'ny olon-tiana
Izaho dia manome endrika anao (anaran'ny olona tadiavinao) amin'ny anaran'i Jesosy, Mary sy Joseph.
Amin'ireto teny ireto dia mampifandray anao indray aho… amin'izay ianao tonga aty amiko toy ny zanak'ondry malemy fanahy sy feno fitiavana sy fiheverana ahy, zavaboarin'Andriamanitra, mangataka anao aho mba tsy hieritreritra ahy fotsiny sy hanao azy feno fitiavana.
Izaho ... (ny anaranao) dia mampifandray anao, lahy (na vehivavy).
Amin'ny anaran'ny fanahin'ny fanapahana dia ... anjarako ny fahatsapana dimy, ny fitsaranao, ny eritreritrao ary ny sitrakao: amin'izay ianao ... mijanona hanjaka-a, mijanona ho malemy paika amin'ny tongotro ary mifamatotra tanteraka amiko, samy ao ny ankehitriny toy ny amin'ny ho avy.
Izay rehefa ... mahita azy aho ... (na izy) mahita ahy. Rehefa ... maheno azy aho dia ... (na izy) mandre ahy. Rehefa ... mijery azy aho dia ... (na izy) mijery ahy. Rehefa ... mikasika azy aho ... (na izy) mikasika ahy.
Ary rehefa ... misento aho ... (na izy) misento.
Ka ny sainao dimy, ny sainao, ny fahatsapanao ary ny fonao dia hamatotra mandrakizay amiko ao anatin'io eritreritra io ihany. Andriamanitra no angatahiko izany ary amin'ny toetra tena itakiako azy. Amen.
Rehefa mivavaka amin'ny olon-tiana ny zanak'ondry malemy, dia lasa hery ny fahalemem-panahiny satria tsy misy olona tsara kokoa noho izy hanampy antsika hitahiry ny fandriam-pahalemana izay very matetika noho ny toe-javatra izay tsy haintsika fehezina.
Amin'ny fitiavana, ny ankamaroan'ny toe-javatra manahirana dia mitranga.
Afaka mijanona ilay olon-tiana mitondra tena amin'ny fomba tsy dia mahazatra y mangalatra ao an-tsaintsika izany. Mahery ny vavaka ary amin'ireo toe-javatra ireo no ahafahantsika misambotra azy.
Ny angovo ratsy dia mandositra koa ny trano izay misy ilay zanak'ondry foana ao anatin'ny vavaka isan'andro ary raha miaraka amin'ny ankohonany manontolo dia tsara kokoa izany.
Fivavaky ny zanak'ondry malefaka hanjaka, hanjaka ary hamatotra
Mandresy, mandresy, mandresy.
Jesosy Kristy no mpandresy. Toy ny fahamarinana lehibe izany, dia nandresy aho ……. ny fon'ny ……., manetry tena toy ny zanak'ondry tonga eo an-tongotro, tahaka an'i Jesosy Kristy nankany amin'ny hazo fijaliana.
Zanak'ondry kely halemy fanahy fa eo ambonin'ny alitara ianao, reseo ny fahavaloko izay manohitra ahy; Enga anie ny foko tonga nofo ao aminy, tahaka an'i Jesosy Kristy tonga nofo, ka naniraka an'i Masindahy Lazarosy, FAHAFATESANA Nandresy izy, satria tsy maintsy mandresy an'ity fahavalo mpamadika ity aho …… Amin'ny roa no hijereko anao, miaraka amin'ny telo no hakako anao, amin'ny ran'i Jesosy Kristy no hamotahan'ny foko anao.
Hitako fa voahodin-kofehy ny fahavaloko ary miasa tsy misy ilana azy izy.
Ny ran'i Jesosy Kristy no manontany ahy, ary tsy hanome izany aho. Mangataka aminao aho, ry Tompo lehibe, fa ento aty aho ……., Fa tsy maintsy mitondra azy io amiko ianao, nanolotra ny tongotro sy resy ary kivy: manana hery handresena azy ianao.
Raha misy zavatra ny devoly manandrana manohitra ahy, eny a ny rariny miala izy, tsy handresy; raha mametraka mpiaro izy dia holavin'ny rehetra. Jesosy Kristy, hiaraka amiko toy ny zanak'ondry ianao, ary rehefa mijery ny fanatrehako ianao dia ho reraka ny rehetra.
Ity vavaka zanak'ondry kely malemy paika ity mba hampiorina, hanjakazaka ary hamatotra dia tena mahery!
Ity vavaka ity dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny andraikitra feno tanteraka lavitra ny eritreritra ratsy sy ny fihetseham-po feno fitiavan-tena.
Ny fangatahana ny manjaka sy mifamatotra ny olona dia tsy fiheveran-tena fa tsy fitiavana fa matetika ny mazava dia tsy mazava ny hevitry ny olon-kafa ary eto dia io vavaka io no lasa fitaovam-piadiana tokana sy mahery indrindra antsika.
Ankoatr'izay dia mihatra amin'ny mpivady ihany izy io fa amin'ny toe-javatra hafa ilaintsika hifehezana mba tsy ho voafehy ny raharaha.
Saingy, ny akora mahery vaika indrindra ao anatin'izany na ireo vavaka hafa rehetra ireo, dia ny finoana anaovana azy, tsy misy vavaka atao amin'ny finoana tsy hahazoana valiny.
Hanjaka amin'ny fahavalo
Ilay zanak'ondry kely malemy fanahy izay hitanao eny ambonin'ny alitara, ampio aho hifehy sy handresy ireo fahavalo rehetra izay manohitra ahy, ka mampiditra am-poko ao am-pony, toy ny fahatongavan'i Jesosy Kristy malalantsika, ho baikoin'i Saint Lazarosy izay nandresy, toy ny faniriana Nandresy ny fahavaloko nivadika aho, tamin'ity fotoana masina ity no nitodihako anao, nosamboriko ianao ary nofatoriko, Ary noho ny ra nalatsak'i Jesosy Kristy Tompontsika, dia vaky ny fony.
Ry Raiko, Zanaka ary Fanahy Masina malala, ilay Andriamanitra marina iray, avelao ny fahavaloko ho tonga amin'ny fanekena ary mbola, toa ny zanakao malalanao nankany amin'ilay hazo.
Hitako ho avy ny fahavaloko, miaraka amin'ny sandriny malemy ary tsy mitampina ny masony, ary raha manontany ahy ny ranao sambatra ianao dia tsy homeko azy intsony.
Mangataka aminao aho, tompoko, ho tonga at me amiko, amin'ny fibebahana sy hanolo-tena eo an-tongotro, manjaka, resy ary mandromano, mba handresena azy amin'ny alàlan'ny herinao lehibe.
Raha ny fahavaloko tonga hanandrana zavatra hanoherana ahy, manjaka ny tompoko ary aza avelany, raha te-hitondra ahy eo amin'ny fitsarana izy, dia lavo izy fa misy mpiaro azo omena azy. Jesosy Kristy malalako indrindra, ho tahaka ny zanak'ondry ianao, fa raha hitan'ny fahavaloko ny fanatrehako, dia miverina aminy avokoa ny ratsy rehetra maniry ahy.
Raha te-hanjaka fahavalonao ianao, ity no vavaka ombilahy kely malemy fanahy.
Ny zavatra rehetra mangalatra ny fandriam-pahalemana, izay mampanahy antsika, dia mahatonga antsika hamoy fo na mahatonga antsika hahatsapa tsy fahatokisana ny toe-javatra izay mahatonga ity vavaka ity hiteraka antsika hohazantsika ny fahatsapana sy ny fiadanantsika anaty.
Ny fananana fifehezana ny toe-javatra mety hitranga miaraka amin'ireo rehetra izay nanambara ny tenany ho fahavalontsika dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny vokatr'ireny toe-javatra ireny.
Mety ho fahavalontsika na mpianakavy isika.Ireo vavaka mahery ity dia hanampy antsika hihazona zavatra milamina ho an'ny tenantsika sy ho an'ny rehetra.
Na inona na inona ny toe-javatra.
Toy izany koa, ireo fitaomana ratsy rehetra izay ataon'ny fahavalontsika fankahalana sy fankahalana dia esorina amin'ny manodidina antsika.
Ny fanadiovana ny tranontsika sy ny orin'asa amin'ny fitaomana ratsy dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny fifehezana ireo hetsika sy fanapahan-kevitra izay mihodina amin'ny fahavalontsika.
Raha te tony ianao ary tezitra amin'ny lehibeny, azonao atao ny mivavaka izay fehezanteny etsy ambony. Mila manolo ny anaranao fotsiny ianao.
Indraindray ireo tompon'andraikitra amintsika dia mety manasarotra ny fiainantsika ho sarotra.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fandaozana ny asa dia tsy safidy tokony hodinihina ary amin'izao fotoana izao dia atoro hanao an'io ianao vavaka mba hialana amin'ny lehibentsika ary amin'izany dia hampihena ny faneren'ny asa.
Ireo toe-javatra iainana ireo dia matetika mahatsapa ao an-trano sy amin'ny tontolo rehetra misy antsika ary ilaina ny manafaka antsika amin'ny fihoaram-peo ratsy alohan'ny hampisy fahavoazana ho an'ny olona akaiky azy.
Ny finoana, ny andraikitra ary mihoatra ny faniriana tsara rehetra dia tokony ho maotera antsika hanao vavaka satria izay vao hahazo ny valiny ilaintsika.
Azoko lazaina ve ny vavaka rehetra?
Azonao atao sy tokony hivavaka ny vavaka rehetra.
Ny zava-dehibe dia hoe ny vavaky ny zanak'ondry malefaka dia efa nivavaka tamim-pinoana lehibe ary betsaka ny finoana tao am-pony.
Manonofy momba an'i Aal